Derek Jeter and Don Mattingly Fall on Wrong Side ofaYankees Rout – Sports News 9
NFL midseason report: Rams, Eagles, Roger Goodell, more
Fairly newsy first half of the season. The 10 big stories of the first half, and what each means in the second half: 1. The anthem controversy, and Colin Kaepernick’s unemployment, roiled the league. It’s beenawild ride over the past 15 months, since Colin Kaepernick first sat and then kneeled for the anthem […]
အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ အသင်းပြောင်းရွှေ့သင့်တဲ့ ကစားသမားများ – FOX Sports Asia
ယခုနှစ်အတွက် ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း သေချာတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကတော့ နည်းနေပါသေးတယ်။ ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလဆိုတာကတော့ နည်းပြတွေအတွက် မိမိတို့အသင်းရဲ့ လူစာရင်း ကို အကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက်လည်း ကလပ်အသင်းတစ်ခုခုမှာ သူတို့ကစားသမားဘ၀ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းဖုို့ အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ FOX Sports Asia ကတော့ အပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်း အသင်းပြောင်းသင့်တဲ့ ကစားသမား (၇)ဦးကို စုစည်းထားပါတယ်။ အိုလီဗာဂီရော့ဒ်(အာဆင်နယ်) အာဆင်ဝင်းဂါးအတွက် ဂိုးသွင်းစက်တစ်လုံးလို အားကိုးအားထားပြုခဲ့ရတဲ့ ဂီရော့ဒ်အနေနဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခြေစွမ်းတွေလျော့နည်းလာခဲ့ပြီးအရန်ခုံထိုင်ရတဲ့အချိန်တွေက ပိုပြီး များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆန်းချက်ဇ်သာ အာဆင်နယ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာခဲ့မယ်ဆိုရင် တော့ ဂီရော့ဒ်အတွက် ကောင်းတဲ့အလားအလာပါ။ ဒါပေမယ့် လည်း နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ ပုံမှန်နေရာရနေတဲ့ လာကာဇက်တီကို်လည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆန်းချက်ဇ် ထွက်ခွာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ဂီရော့ဒ်အတွက် နေရာတစ်ခုက မသေချာသေးပါဘူး။ […]
There’s no time for an Elias performance: Raw, April 16, 2018
Petr Cech got the nod over the Gunners’ new signing …
Total Video Views: 561824 On Episode4of UFC 210 …
13:35 ShareClose Getty Images We want to know how you …
Steve Austin Returns For WWE RAW 25 Opener With The McMahons, Delivers Stunners (Photos, Videos) – WrestlingInc.com
WWE Hall of Famer Steve Austin returned to TV on …
Michael Bisping – Robert Whittaker is the Most Boring Individual in UFC!
Total Video Views: 6057 Michael Bisping – Robert Whittaker is …